စိတ်တိုစိတ်ရှုပ်လွယ်တဲ့သူတွေ စိတ်ကြိုက်ထုနိုင်မယ့် အကြီးစား “Enter Key” – DigitalTimes.com.mm
စိတ်တိုစိတ်ရှုပ်လွယ်တဲ့သူတွေ စိတ်ကြိုက်ထုနိုင်မယ့် အကြီးစား “Enter Key”
စနေ တနင်္ဂနွေမှာ အားရပါးရ အနားယူခဲ့သမျှ တနင်္လာနေ့ရောက်တာနဲ့ လုပ်စရာတစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့အတူ အလုပ်ထဲရောက်လာကြပြန်ရော…
အေးဆေးသမားတွေကတော့ ဘယ်လို force တွေ stress တွေပဲလာလာ ကိစ္စသိပ်မရှိပေမယ့် စိတ်တို စိတ်ရှုပ်လွယ်တတ်တဲ့ stress များတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ complain တွေ ဂဂျိုးဂဂျောင်အလုပ်တွေ အချိန်တိုအတွင်းမပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေပေးလာတဲ့အခါ stress တွေပိလာပါလိ့မ်မယ်။ လုပ်သမျှတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုစိတ်မရှည်တော့တဲ့အခါ သူ့ကို အကူအညီပေးနိုင်မယ့်သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ??
ဒီလို stress များတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါ စိတ်တိုစိတ်ရှုပ်လာတိုင်း ဝုန်းဖို့ အကြီးစား “Enter Key” ကြီးရောက်လာပါပြီ။ ဂဂျိုးဂဂျောင်မေးလ်တွေပို့လာသလား Enter key ကိုထု၊ ကွန်ပျူတာကြောင်သွားသလား Enter Key ကိုထု၊ ဂိမ်းဆော့မလား စိတ်တိုလာတိုင်း Enter Key ကိုထု၊ နောက်ဆုံး စိတ်မတိုရင်တောင် စာရေးတိုင်း Enter ကို တဗျောင်းဗျောင်းနှိပ်တတ်တဲ့ ကိုယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ သဘောတွေ့ချင်စရာကြီးပါပဲ။ အဓိကကတော့ စိတ်တိုလွယ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ဖြေလျှော့ရာတစ်ခုပေါ့။
အရွယ်အစားကတော့ 14 x 20 cm ရှိပြီး ၂၀၀ ဂရမ်ရှိပါတယ်။ သုံးဖို့ကတော့ ပါတဲ့ USB ကြိုးလေးကို ကွန်ပျူတာမှာ တပ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ ဘာမှသိပ်မခက်ခဲပါဘူး။ ပျော့ပျော့အိအိရေမြှုပ်ဖော့တုံးနဲ့ လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ နှိပ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သလို ပင်ပန်းတဲ့အခါလည်း ခေါင်းအုံးအိပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ stress တွေများလာတိုင်း ကီးဘုတ်ကိုတဗျောင်းဗျောင်းရိုက်စရာမလိုဘဲ ဒါကြီးကိုသာ တဒုန်းဒုန်းထုနေလိုက်ရင် စိတ်သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ 😉 ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၇ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိပါတယ်။
Enter ခလုတ်တစ်ဗျောင်းဗျောင်းရိုက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်လိုဘဝတူသမားတွေများရှိရင်….. 😉
စနေ တနင်ျဂနှမှော အားရပါးရ အနားယူခဲ့သမြှ တနင်ျလာနရေ့ောကျတာနဲ့ လုပျစရာတဈပုံတဈပငျနဲ့အတူ အလုပျထဲရောကျလာကွပွနျရော…
အေးဆေးသမားတှကေတော့ ဘယျလို force တှေ stress တှပေဲလာလာ ကိစ်စသိပျမရှိပမေယျ့ စိတျတို စိတျရှုပျလှယျတတျတဲ့ stress မြားတတျတဲ့သူတှအေတှကျကတြော့ complain တှေ ဂဂြိုးဂဂြောငျအလုပျတှေ အခြိနျတိုအတှငျးမပွီးနိုငျတဲ့အလုပျတှပေေးလာတဲ့အခါ stress တှပေိလာပါလိ့မျမယျ။ လုပျသမြှတဈခုခငျြးစီတိုငျးကိုစိတျမရှညျတော့တဲ့အခါ သူ့ကို အကူအညီပေးနိုငျမယျ့သူက ဘယျသူဖွဈမလဲ??
ဒီလို stress မြားတတျတဲ့သူတှအေတှကျ ကှနျပြူတာသုံးတဲ့အခါ စိတျတိုစိတျရှုပျလာတိုငျး ဝုနျးဖို့ အကွီးစား “Enter Key” ကွီးရောကျလာပါပွီ။ ဂဂြိုးဂဂြောငျမေးလျတှပေို့လာသလား Enter key ကိုထု၊ ကှနျပြူတာကွောငျသှားသလား Enter Key ကိုထု၊ ဂိမျးဆော့မလား စိတျတိုလာတိုငျး Enter Key ကိုထု၊ နောကျဆုံး စိတျမတိုရငျတောငျ စာရေးတိုငျး Enter ကို တဗြောငျးဗြောငျးနှိပျတတျတဲ့ ကိုယျလိုလူမြိုးတှအေတှကျကတော့ သဘောတှခေ့ငျြစရာကွီးပါပဲ။ အဓိကကတော့ စိတျတိုလှယျတတျတဲ့သူတှအေတှကျ စိတျဖွလြှေော့ရာတဈခုပေါ့။
အရှယျအစားကတော့ 14 x 20 cm ရှိပွီး ၂၀၀ ဂရမျရှိပါတယျ။ သုံးဖို့ကတော့ ပါတဲ့ USB ကွိုးလေးကို ကှနျပြူတာမှာ တပျလိုကျရုံပဲဆိုတော့ ဘာမှသိပျမခကျခဲပါဘူး။ ပြော့ပြော့အိအိရမွှေုပျဖော့တုံးနဲ့ လုပျထားတာဖွဈလို့ နှိပျရတာ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈသလို ပငျပနျးတဲ့အခါလညျး ခေါငျးအုံးအိပျလို့ရပါလိမျ့မယျ။ stress တှမြေားလာတိုငျး ကီးဘုတျကိုတဗြောငျးဗြောငျးရိုကျစရာမလိုဘဲ ဒါကွီးကိုသာ တဒုနျးဒုနျးထုနလေိုကျရငျ စိတျသကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။ 😉 ဈေးနှုနျးကတော့ ၁၇ဒျေါလာလောကျပဲရှိပါတယျ။
Enter ခလုတျတဈဗြောငျးဗြောငျးရိုကျတတျတဲ့ ကိုယျ့လိုဘဝတူသမားတှမြေားရှိရငျ….. 😉
Moto Mods များအားလုံးနဲ့ တွဲဖက် သုံးနိုင်တဲ့ Moto Z3 Play